Wenqaba ukuphumela obala ngokhetho lwe-ASA uSikhosana - Impempe
Wenqaba ukuphumela obala ngokhetho lwe-ASA uSikhosana
U-Aleck Sikhosana we-ASA uthi akunakwe abasubathi manje hhayi bona
Umengameli wenhlanngano ebhekelele ezokusubatha kuleli, i-Athletics South Africa (ASA), u-Aleck Sikhosana ucashe ngesithupha, wenqaba ukusho ukuthi uzolungenela noma ngeke ukhetho lokuhola le enhlangano ngoMeyi.
I-ASA izokhetha ubuholi obusha ngoMeyi 8, kanti uSikhosana akafuni ukusho noma uyabuyela yini noma cha. Usevele ube sesihlalweni iminyaka eyisithupha njengoba ihlandla lakhe lelulwa ngonyaka ngenxa yokubheduka kweCoronavirus nyakenye.
“Ngeke ngisho noma ngizongena okhethweni noma ngeke. Lokho okwami, wena ungazama ukuthola ukuthi yikuphi okukwenzeka,” usho kanje uSikhosana exoxa nentatheli ye-The Top Runner.
“Kuyilungelo lami ukuthi ngikuveze noma ngingakuvezi emphakathini ukuthi ngizolungenela ukhetho noma ngeke.
“Ophumela obala ngokuthi yena uyalungenela ukhetho, okwakhe lokho, uzikhethele yena, akuhlangene nami.
“Angifuni ukukhuluma ngakho. Akusona isikhathi esifanele lesi,” kuqhuba uSikhosana, okukhona abamncomayo ngomsebenzi awenzile kule minyaka emihlanu ephethe. Nokho kukhona nabanganelisekile abafuna agudluzwe.
Ngokomthethosisekelo we-ASA, uSikhosana nebhodi lakhe lonke bavumelekile ukuqokelwa ukubuyela emsebenzini wabo, ngokusho kukaTerrence Magogodela, oyisikhulu esiphezulu kwi-ASA. Ukuqokwa kwabazongenela ukhetho lwe-ASA kuvalwa ngoMashi 3.
Khonamanjalo, i-ASA seyikuvulile ukuqhubeka kwemincintiswano yezokusubatha kuleli ngemuva kokuba yayimise yonke into ngesikhathi kunokwenyuka kwezibalo zabatheleleka ngeCoronavirus kuleli.
Nokho kunokungeneliseki kubasubathi ngenxa yokungacaciseleki ngezinto ezithile, futhi basola uSikhosana ngokucasha.
Kodwa lesi sikhulu sithe asicashile futhi akukho esikufihlayo wukuthi nje besishonelwe yilungu lomndeni.
“Ngihlezi ngitholakala ukuxazulula izinkinga nokunye okungidingayo. Ngisazilile njengamanje ngoba ngishonelwe umuntu obesondelene kakhulu nami. Angizange ngibalekele muntu, noma ngizibe izingcingo zabathile.
“Kumele engabe manje sekubhekwe abasubathi hhayi i-ASA nebhodi layo. Akumele sizimoshele isikhathi ngokukhuluma ngezinto esezidlulile.
“Sesibavulele ukuthi baqhubeke nemijaho nemincintiswano, manje sekusele kubo ukuthi baqhubeke nayo. Akekho engimkweleta incazelo,” kuthiwa usho kanje ethetha uSikhosana.
Previous Previous post: Inkinga kuPitso kumiswa izihlabani ze-Al Ahly
Next Next post: Owakuleli uqashelwe isikhundla sokuqeqesha iqembu lesizwe eSouth Sudan